इटाली मा रेलवे स्टेशनहरु को नजिकै हाम्रो अन्तिम सर्वश्रेष्ठ होटल हो को UNA होटल नापोलि, नेपल्स मा केन्द्रिय रेल स्टेशन विपरीत स्थित एक authentically पुनःस्थापित ऐतिहासिक भवन. होटल पट्टी छत मा एक पेय आनन्द, जो VESUVIUS ज्वालामुखी एक दृश्य छ. तपाईं दृश्यमा एक सानो नजिक प्राप्त गर्ने निर्णय भने, तपाईं एक लाग्न सक्छ छोटो रेल सवारी पम्पी र माउन्ट VESUVIUS हेर्न.
त्यहाँ धेरै अविश्वसनीय ऐतिहासिक स्थानहरू नजिकै, त्यसैले यदि तपाईं नेपल्स लामो बसाइ बनाउन. तपाइँ सक्षम हुनुहुनेछ क्याथेड्रलमा हिंड्नुहोस् नेपल्स को, सन्त Chiara, सान Gregorio Armeno, सान Lorenzo Maggiore, राष्ट्रिय पुरातात्विक संग्रहालय, साथै ऐतिहासिक शहर को केन्द्र मा Duomo सडक रूपमा. तपाईं पनि नापोलि Sotterranea मा शहर अन्तर्गत जान सक्नुहुन्छ.